Yini i-smartwatch | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | AmaSelula, SmartWatch
Eminyakeni yakamuva sibonile ukuthi uhlobo olusha lwedivayisi seluphenduke kanjani into eye yanda kakhulu kubasebenzisi abaningi. Uma sihumushela esiNgisini ngqo leli gama elithi smartwatch, sithola igama elithi smartwatch, igama elingalichazi ngokuphelele, kusukela uhlakaniphile unokuncane impela.
Ama-Smartwatches, selokhu aqala ukungena emakethe ngePebble, abe yimishini ephindaphinda izaziso esizithola ku-smartphone yethu. Kepha eminyakeni edlule, inani lemisebenzi abayinikezayo lenyukile. Uma ufuna ukuxazulula konke ukungabaza maqondana nalolu hlobo lwedivayisi, sizochaza ngezansi yini i-smartwatch.
Izinhlobo zokuqala ezafika emakethe, zanikela ngemisebenzi embalwa kakhulu uma iqhathaniswa neyamanje, yingakho umphakathi we-niche wawumncane kakhulu futhi kwakungeyona into engenakwenzeka ukubona umuntu emgwaqweni nganoma iyiphi yalezi zinhlobo. Ukuphindaphinda izaziso ze-smartphone nokutshela isikhathi kwakuyimisebenzi ephambili ukuthi basinikeze, umsebenzi owenele ukubheka ukuthenga kwabo, ngoba bekugwema ukuchitha sonke isikhathi ubheka i-smartphone ukubona ukuthi lowo msindo uvela kwi-smartphone yethu noma emvelweni.
1 Izici ze-Smartwatch
2 Ukuhambisana kwe-Smartwatch
3 Ukulinganisa amasongo
4 Ukwenza ngezifiso kuma-smartwatches
5 Ungayithenga kuphi i-smartwatch?
Uchungechunge lwe-Apple 4 LTE
Kepha njengoba iminyaka isihambile, ama-smartwatches asebenzise ubuchwepheshe obuningi futhi namuhla, singathola ukuthi amamodeli amaningi awagcini nje ngokubala izinyathelo zosuku nosuku, kepha futhi asikhombisa izinga lokushaya kwenhliziyo (lisixwayisa uma liphezulu kakhulu) , yenza i-electrocardiograms, bathola ukuphakama kanye nokuwa kwabasebenzisi futhi bazise abezimo eziphuthumayo uma umsebenzisi enganyakazi, bahlanganisa i-GPS futhi, ngokuya ngemodeli, basivumela ukuthi senze izingcingo.
Kepha akusivumeli nje kuphela ukuthi silinganise umsebenzi wethu wansuku zonke, ngoba futhi kusivumela ukuthi sidlale umculo wethu esiwuthandayo, okungukuthi, sisebenzisa ihedisethi ye-bluetooth, ukuphatha okuzenzakalelayo kwekhaya lethu, ukuthumela imiyalezo, ukuphendula izingcingo , ukuxhumana ne-imeyili yethu ... noma ngisho nokudlala, noma kunjalo ulwazi olusinikeza lona mayelana nalokhu luvame ukushiya ungathandeki.
Onke ama-smartwatches anjalo, anawo, ngqo kusuka kudivayisi noma nge-smartphone axhumene nayo, i- kungenzeka ukufaka izicelo ezivela eceleni, ukuze sandise imisebenzi abasinikeza yona, eminye yayo ngokungaqondakali ayitholakali ngokwendabuko. Ngaphezu kwalokho, isinikeza nenani elikhulu lezindawo zokubuka, ukwenza ngokwezifiso ukubukeka kwedivayisi yethu, ukuze sikwazi ukuzivumelanisa nezinto esizithandayo.
Lezi zindawo zokubuka nazo zivumela ukungezwa izinkinga. Izinkinga ziyizengezo ezincane esingazengeza kuzindawo zokubuka futhi zisikhombisa imininingwane evela kwezinye izinhlelo zokusebenza, njengesimo sezulu, ukuqokwa kwe-ajenda elandelayo, izinga lokungcola kwemvelo ...
I-Samsung Gear S3
Ngokungafani nezwe lama-Smartphones, lapho singathola khona kuphela amadivayisi ane-iOS ne-Android, ezweni lama-smartwatches, esinakho inani elikhulu lamamodeli, amamodeli aphethwe yizinhlelo ezahlukahlukene zokusebenza. Uma sikhuluma ngezinhlelo zokusebenza kwalezi ezimbili ezinkulu, i-iOS ne-Android, emakethe sinamawatchwat smart aphethwe yi-watchOS (iOS) kanye ne-wearOS (Android) esinayo.
Ukuhambisana okunikezwa yi-iOS nge-watchOS ne-Android nge-wearOS ngeke sikuthole uma siwela amapulatifomu, ngakho-ke uma ufuna ukuzuza kakhulu kudivayisi yakho, into engcono kakhulu ongayenza ukukhetha imodeli evumelana nayo. Endabeni ye-iPhone yi-Apple Watch ngenkathi kwenzeka kunoma iyiphi i-terminal ye-Android noma iyiphi imodeli ephethwe yi-wearOS.
Uma singenandaba nokusizakala ngayo yonke imisebenzi la madivayisi angasinikeza yona, ngoba okungabizwa iningi yi-aestheticsNgaphezu kokuthola izaziso, uma singabasebenzisi be-iPhone, singaxhuma noma iyiphi idivayisi ephethwe yi-Wear OS, ngenxa yohlelo lokusebenza olutholakala ku-App Store. Noma kunjalo, singakwazi kuphela thenga i-Apple Watch uma sine-iPhone, ngoba i-Apple ayisiniki sicelo ku-Google Play Isitolo ukuze sikwazi ukusisebenzisa kulesi simiso semvelo.
Ngaphezu kwe-watchOS ne-wearOS, singathola futhi amadivayisi aphethwe yi- I-Tizen, isistimu yokusebenza ephathelene nomkhiqizo waseKorea i-Samsung. Sekuyiminyaka embalwa, i-Samsung ishiye ngokuphelele i-wearOS, phambilini i-Android Wear, kuwo wonke amawashi ayo ahlakaniphile, ephethwe yiTizen, uhlelo olusebenzayo olunganiki ukusetshenziswa kwebhetri okuphansi kuphela, kepha nokusebenza kuphakeme kakhulu uma kuqhathaniswa ne-wearOS.
Ngaphakathi kwamawatchwatches, kufanele futhi sisho izinhlobo ezahlukahlukene zamamodeli umenzi uFitbit azibeka kithi, umkhiqizi oza emakethe ethengisa amasongo wokulinganisa kepha ngokuhamba kwesikhathi, nangemva kokuthengwa kwePebble, uyazi ukuthi angazivumelanisa kanjani nezikhathi ezintsha.
Asikwazi ukuyeka ukukhuluma ngamaqembu we-quantizer, abizwa nangokuthi ama-smartwatches ngamanye, yize umsebenzi wawo ugxile kakhulu qopha yonke imisebenzi yansuku zonke esiyenzayo, noma uhamba, ugijima, uhamba ngebhayisikili ... Futhi ngithi nazo zingabizwa ngamawatchwatches, ngoba amanye amamodeli asivumela nokuthi sithole izaziso, noma abasivumeli ukuba sibaphendule noma sithole izingcingo, njengokungathi singenza ngama-smartwatches aphethwe yi-Tizen, i-watchOS ne-wearOS.
Ama-quantifiers, awunaso isitolo sohlelo lokusebenza Owakho ukufaka izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni, ngakho-ke inani lemisebenzi elisinikeza yona lilinganiselwe kuphela futhi kuphela kulokho okunikezwa ngumenzi.
Ukwenza ngezifiso kuma-smartwatches
Onke ama-smartwatches asemakethe atholakala ngemibala ehlukahlukene yamabhokisi futhi anezintambo ezahlukahlukene, ukuze akwazi ukuyihlanganisa nezingubo zethu zansuku zonke, noma ngabe yisudi nothayi wokuhambela umcimbi noma ukuya emsebenzini, ngezingubo zazisa noma ngezemidlalo. Ngalo mqondo, umkhiqizi onezinketho eziningi ezitholakalayo kithi yi-Apple.
I-Apple Watch isinikeza inani elikhulu lezintambo zazo zonke izinhlobo, izinto zokwakha kanye nemibala, ngakho-ke uma ungumuntu oyimfashini futhi uthanda ukuhlala uhlangana, i-Apple Watch iyithuluzi olidingayo, inqobo nje uma une-iPhone, njengoba ngishilo ekuqaleni. Umkhiqizi wesibili naye obeka esinakho inombolo enkulu yemichilo yi-Samsung enebanga leGear S / Watch, njengoba kunjalo ngeFitbit enebanga layo lama-smartwatches.
Uma sikhuluma ngokwenza ngezifiso ama-quantifiers, amasongo e-Xiaomi Mi Band yiwona asinikeza inani elikhulu kakhulu lezintambo ukwenza ngezifiso idivayisi futhi ngaleyo ndlela sikwazi yivumelanise nezingubo esizigqoka nsuku zonke noma kulo mcimbi.
Ungayithenga kuphi i-smartwatch?
Bonke abakhiqizi benza kutholakale kubasebenzisi ukuthi kungenzeka bathenge izinto zabo ngqo kuwebhusayithi yabo, iwebhusayithi lapho cishe singakaze sithole okunikezwayo, uma kungenjalo. Konke okuphambene nalokho okwenzeka ku-Amazon. Nazi izixhumanisi eziningana lapho ungathenga khona amanani ama-smartwatches amakhulu namadivayisi wokulinganisa ku-Amazon.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Yini i-smartwatch